10000W လျှပ်စစ်စကူတာစက်ရုံ - တရုတ် 10000W လျှပ်စစ်စကူတာ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
bicicletas-para-mujer၊ လျှပ်စစ်စကူတာများ၊ လျှပ်စစ်စကူတာ- 70 မိုင်
DNM ကောင်းသော Suspensions များဖြင့်
ရှေ့ LED မီးကြီး ၂ လုံး ပါရှိပါတယ်။
ရောင်စုံ Led Pedal (အဝေးထိန်း)
2 x 45A ထိန်းချုပ်ကိရိယာဖြင့်
Turn signal ဖြင့်
trotinette လျှပ်စစ် 10kw
ဒါတွေeScooter များခိုင်ခံ့စွာတည်ဆောက်ထားသော်လည်း ၎င်းတို့သည် eScooter လိုင်း၏ ပိုမိုလေးလံသော အပြီးသတ်မှုကို ပုံဖော်ထားသည်။ခြားနားချက်များအတွက် Super 8 50X သည် လျှပ်စစ်စတင်မှု နှင့် ကန်စတင်ခြင်း နှစ်မျိုးလုံး ပါ၀င်သည် - ကျွန်ုပ်တို့ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုသည့် အင်္ဂါရပ် ပါရှိပြီး ၎င်းကို ပြိုင်ကားမှုတ်သွင်းထားသော တာယာနှစ်လုံး နှင့် လေးလံသော အနားသတ် အနားသတ်များ နှင့် တွဲဖက်ထားနိုင်သော ရွေးချယ်ခွင့် ပါရှိသည်။၎င်းတို့သည် ပစ္စည်းများကို အဆက်မပြတ်တပ်ထားရန် ပိုင်ဆိုင်သူထံ ရိုးရှင်းစွာ ဆက်လုပ်သွားရန် လိုလားချက်ရှိသည်။San Franciscans သည် ၎င်းအတွက် များစွာအသုံးတည့်မည်ဖြစ်ပြီး မိုင် 90-အကွာအဝေးနှင့် 95mph အထူးအမြန်နှုန်းသည် ခရီးရှည်သွားလာမှုအတွက် ကောင်းမွန်သောအသုံးပြုမှုဖြစ်သင့်သည်။
kit moteur electric voiture သွန်းလောင်း
သင့်လျော်သောစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်အတူတစ်ဦးခေါက်လျှပ်စစ်စကူတာ 3-5 နှစ် ပေါင်း ပြီး နိုင် တယ် ။ဘက်ထရီသည် လုံလောက်စွာ ခိုင်ခံ့သော်လည်း အလွန်ပြင်းထန်သော ထိုးဖောက်မှုများကို ကြာရှည်ခံနိုင်သည့်ဘက်ထရီမရှိပါ။ဘရိတ်ကိုအသုံးပြုသောအခါ ပိုမိုမြန်ဆန်သော၊ မြင့်မားပြီး တည်ငြိမ်သောရပ်တန့်ခြင်းကို စိတ်ချနိုင်ပါသည်။အပလီကေးရှင်းများစွာတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုထားပြီး၊ ဥပမာ၊ အော်တိုကုန်သွယ်မှု၊ ဘက်ထရီပါဝါသုံး စက်ဘီးများ၊ စကူတာများ၊ လျှပ်စစ်ကားများ၊ ဖော့ကားများ၊ ဂေါ့ဖ်ဘာဂီများ၊ လှေများနှင့် အခြားအရာများစွာအတွက် အသုံးပြုထားသည်။၎င်းသည် အခြားသော ရိုးရိုး dc မော်တာများထက် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသည်။
aduts အတွက်အကောင်းဆုံး2ဘီးလျှပ်စစ်-စကူတာ 7000 10000w လျှပ်စစ်စကူတာ
K11 သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အဆင့်မြှင့်တင်မှုအသစ်ဖြစ်သည်။လျှပ်စစ်စကူတာ၁၁လက်မ ဖုန်စုပ်တာယာ၊ 5000w*2 မော်တာနှစ်လုံး။ စုစုပေါင်း 10000w.ပိုအားကောင်းသည်။
k11 ဘက်ထရီသည် စွမ်းရည်မြင့် လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီဖြစ်သည်။ အလွန်ကြာကြာ အသင့်အနေအထားဖြစ်သည်။
ရှေ့မီးတစ်ချောင်း၊ နောက်အနောက်မီး + ဘရိတ်မီး + ကွေ့မီး။3in 1. မော်တော်ဆိုင်ကယ် ဟွန်းလည်း တပ်ဆင်ထားသည်။ အရမ်းမိုက်တယ်။
အနောက်ဘက်တွင် လက်ကိုင်ဒီဇိုင်းကြောင့် ရွေ့လျားရန် ပိုအဆင်ပြေသည်။
10000W 84v ခေါက်နိုင်သော စမတ်လျှပ်စစ်စကူတာ
ကျေးဇူးပြု၍ ဝယ်ယူပြေစာအား အရောင်းဘောက်ချာအဖြစ် သိမ်းဆည်းပါ။စကူတာ (အတုပျက်စီးမှုနှင့် ချို့ယွင်းမှု) သည် အောက်ပါ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ရောင်းချပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးအပ်သည်-
1.Thescooter ၏အာမခံစားသုံးနိုင်သော စက်များမှလွဲ၍ ၁ နှစ်ဖြစ်သည်။
2.Tireis သည် စားသုံးနိုင်သောကိရိယာဖြစ်သောကြောင့် ၎င်း၏အာမခံသည် 1 လဖြစ်သည်။
72v Dual Motor 10000w လျှပ်စစ်စကူတာ
ရှော့ခ်စုပ်ခြင်းမပြုမီနှင့် အပြီးတွင် မူပိုင်ခွင့်၏ အသွင်အပြင်။
နည်းပညာမူပိုင်ခွင့်အခြား အမှတ်တံဆိပ်များထက် ဘက်ထရီ ပိုသုံး၍ စီးနင်းမှု ပိုကြာသည်။
စိတ်ကြိုက်၊ OEM နှင့် ODM ကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် self balancing scooter လျှပ်စစ်စျေးပေါစကူတာလျှပ်စစ်
1. OEM ထုတ်လုပ်ရေး ကြိုဆိုပါတယ်- ထုတ်ကုန်၊ ပက်ကေ့ခ်ျ။
4. ပေးပို့ပြီးနောက်၊ သင်ရရှိသည့်တိုင်အောင် နှစ်ရက်တစ်ကြိမ် သင့်အတွက် ထုတ်ကုန်များကို ခြေရာခံပါမည်။ထုတ်ကုန်များ.သင်ရသောအခါ
ကုန်ပစ္စည်းများကို စမ်းသပ်ပြီး တုံ့ပြန်ချက်တစ်ခုပေးပါ။ သင့်တွင် ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းပါမည်။
စတိုင်အသစ် အဆီတာယာ trottinette electrique 7000w လျှပ်စစ်စကူတာများ
1. အမြန်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ ချောမွေ့မှု – ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းရဆုံးဗားရှင်းလျှပ်စစ်စကူတာ – ပထမဆုံးနှင့် နောက်ဆုံးမိုင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရန် အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းကို ပေးဆောင်ပါသည်။
2. အသွားအလာကိုကျော်ပါ၊ ငွေစုပါ၊ သင်သွားမည့်နေရာသို့သွားပါ။ဂေဟစနစ်သဟဇာတနည်းဖြင့် လှည့်ပတ်သွားလာနိုင်အောင် ကူညီပေးခြင်းဖြင့် မြို့ပြရွေ့လျားသွားလာနိုင်မှု၏ အနာဂတ်ကို အတူတကွ ပြန်လည်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။
【ပစ္စည်းကောင်း】 အလူမီနီယံအလွိုင်းဖရိန်ကို တံဆိပ်တုံးထုထားပြီး ဖိအားပုံပျက်ခြင်းကို ပြင်းထန်စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။အလေးချိန်ပေါ့ပါးပြီး သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပါတယ်။
【Damping System】 8.5" pneumatic တာယာများသည် M4 ၏ မတူညီသော မြေမျက်နှာသွင်ပြင်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးသည့် တုန်လှုပ်ချောက်ချားမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ယာဉ်မောင်းသူ၏ သက်တောင့်သက်သာရှိမှုကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
【လွယ်ကူသောခေါက်ခြင်း】 အလွယ်တကူခေါက်ရန် ရိုးရှင်းသော အဆင့်အနည်းငယ်သာ လိုအပ်ပါသည်။အမြန်ခေါက်ပြီး အမြန်ထုတ်ခြင်းဖြင့် သင့်အား နေရာပိုပေးသည်။
【ရှေ့နှင့်နောက်နှစ်ထပ်ဒစ်ခ်ဘရိတ်များ】ရှေ့နှင့်နောက်နှစ်ထပ်လျှပ်စစ်ဓာတ်ပြားဘရိတ်များကိုအသုံးပြုပါ၊ ၎င်းသည်အရေးပေါ်ဘရိတ်အတွက်ပိုမိုလုံခြုံသည်၊ သင့်ဘေးကင်းရန်ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှုန်းသည်နိမ့်ပါးသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် trottinette လျှပ်စစ်စကူတာ နှစ်ဘီးစကူတာ လျှပ်စစ်အသစ်
လက်ချောင်းအခိုးအငွေ့ဘေးရှိ မျက်နှာပြင်တစ်ခု ပြသသည်။ဘက်ထရီအဆင့်၊ လက်ရှိအမြန်နှုန်း၊ သင်ရောက်ရှိနေသော ဂီယာနှင့် ခရီးအကွာအဝေး။၎င်းကို နေရောင်တိုက်ရိုက်မြင်ရပြီး မိုဘိုင်းကိရိယာ သို့မဟုတ် GoPro အား အားသွင်းရန် USB အပေါက်ပါရှိသည်။ဘက်ထရီ၏ကျန်းမာရေးကို စောင့်ကြည့်ရန် ဗို့အားပြကွက်လည်း ပါရှိပါသည်။The Ghost တွင် အလုပ်ကိစ္စများလုပ်ဆောင်သည့်အခါ လုံခြုံရေးထပ်တိုးရန် ဘောင်ပေါ်တွင် သော့ချိတ်ထားရန် သော့မီးနှိုးခြင်းနှင့် အစက်အပြောက်များ ပါရှိသည်။မိုးရေထဲမှာ မထားခဲ့ဘဲ၊ Ghost မှာ IP54 အဆင့်သတ်မှတ်ထားတာကြောင့် ရေပက်တာက ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ထို့အပြင် သင့်အား သန့်ရှင်းစေရန်အတွက် ရှေ့နှင့်နောက်အကာအကာများပါရှိသည်။
trottinette electrique Smart Balance2Wheel လျှပ်စစ်စကူတာများ
နောက်မီးအသစ်သည် ပိုမိုကြီးမားသောကြောင့် ညဘက်တွင် ပိုမိုလုံခြုံစွာ မောင်းနှင်နိုင်စေရန်အတွက် အခြားသူများသိရှိရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
အသစ်စက်စက် 10W ရှေ့မီးသည် တောက်ပမှုမြင့်မားပြီး ဓါတ်ရောင်ခြည်အကွာအဝေးသည် 20 မီတာအထိရှိသည်။ရှေ့မီးမှိန်မှိန်ခြင်းမှကာကွယ်ရန် အလင်းရောင်ထောင့်ဒီဇိုင်းကို မြင်ကွင်းမျဉ်းအောက်၌ရှိနေစေရန် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသည်။
ပိုမိုကောင်းမွန်စွာမြင်နိုင်စေရန် အရှေ့၊ ဘေးနှင့် အမြီးရောင်ပြန်ဟပ်များ
ကားရှေ့၊ ဘေးဘက်နှင့် နောက်မီးများတွင် Reflectors များကို ထည့်သွင်းထားပြီး ညဘက်မောင်းနှင်နေစဉ် ဘေးကင်းစေရန်အတွက် ညဘက်မြင်နိုင်စွမ်းကို ပိုမိုတိုးတက်စေသည်။
72v ဘက်ထရီ patinete electrico အရွယ်ရောက်ပြီးသူလျှပ်စစ်စကူတာအသစ်
EU၊ US၊ UK၊ Russia၊ Canada၊ Australia၊ Thailand၊ TAX ကို ကျွန်ုပ်တို့မှ ကြိုတင်ငွေပေးချေပါမည်။သင်အထုပ်ကိုလက်ခံရရှိသောအခါ, သင်သည်အခွန်ပေးဆောင်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။အခြားနိုင်ငံများတွင် အခွန်စည်းကြပ်မှုမရှိခြင်း သို့မဟုတ် အကောက်ခွန်အနည်းငယ်သာ ရှိနိုင်သည်။
သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါက ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကို တိုင်ပင်ပါ။
အီးယူသို့ ပို့ဆောင်ခြင်း- ကျွန်ုပ်တို့ စေလွှတ်ပြီးနောက် ရထားပို့ဆောင်မှု (အီးယူအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ) ဖြင့်။အီးယူသို့ ပို့ဆောင်ရန် ၃၅ ရက်ခန့် ကြာမည်ဖြစ်သည်။အခွန်မဆောင်ပါ။သင့်ပြည်တွင်းသို့ ကုန်ပစ္စည်းများရောက်ရှိပြီးမှသာ ခြေရာခံနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
US သို့ ပို့ဆောင်ခြင်း- ကျွန်ုပ်တို့က ၎င်းကို ပေးပို့ပြီးနောက် ရေကြောင်းဖြင့် ပို့ဆောင်ခြင်း၊ သင့်နေရာသို့ ပို့ဆောင်ရန် ရက်ပေါင်း 40 ခန့် ကြာပါမည်။ အခွန်မလိုပါ။သင့်ပြည်တွင်းသို့ ကုန်ပစ္စည်းများရောက်ရှိပြီးမှသာ ခြေရာခံနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ရုရှားနိုင်ငံသို့ ပို့ဆောင်ခြင်း- ကျွန်ုပ်တို့ ပေးပို့ပြီးနောက် ရထားဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။မော်စကိုမြို့သို့ပို့ဆောင်ရန် 14-30 ရက်ခန့်ကြာလိမ့်မည်။အခွန်မဆောင်ပါ။သင့်ပြည်တွင်းသို့ ကုန်ပစ္စည်းများရောက်ရှိပြီးမှသာ ခြေရာခံနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အမြန်မှာယူလိုပါက လေကြောင်းဖြင့် ပို့ဆောင်နိုင်ပြီး အပိုကုန်ကျစရိတ်များ လိုအပ်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပြီး အသေးစိတ်ကို ပြောပြပေးပါမည်။
ခေတ်ဆန်သောလျှပ်စစ်စကူတာ patinete electrico
ကားတွင် တပ်ဆင်သည့်အခါ ဘက်ထရီကို အပူလွန်ကဲခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။e-Scooter ကို ခြောက်သွေ့ပြီး အရိပ်ရတဲ့နေရာမှာထားပြီး နေရောင်နဲ့ တိုက်ရိုက်မထိတွေ့ဘဲ ရပ်နားပါ။သင့်ဘက်ထရီကို ပုံမှန်အားသွင်းပြီး ၎င်း၏သက်တမ်းကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက် ၎င်းအား အားအလွန်အကျွံမထုတ်ပါနှင့်။
သင့် Trotinette လျှပ်စစ် e-Scooter ကို အချိန်အတော်အတန်ကြာအောင် အသုံးမပြုရန် စီစဉ်နေလျှင်ပင်၊ ဘက်ထရီကို အားအပြည့်သွင်းပြီး/သို့မဟုတ် ပုံမှန်အားပြန်သွင်းပါ။အိမ် သို့မဟုတ် ကားဂိုဒေါင်အတွင်း သိမ်းဆည်းပါ။